Bisadaydu ma xanuunsan tahay? - Waa maxay calaamadaha lagu garto? | Bezzia
Sideen ku ogaan karaa haddii bisadaydu xanuunsan tahay?
Waxaan had iyo jeer sheegnaa in xayawaan -rabaayadu hadalka ka maqan yihiin waana hubaal inaan sax nahay. Sababtoo ah marka laga reebo shirkadda ay na siiyaan iyo jawaabtooda kicinta, waxay umuuqataa inaan si fiican u naqaanno. Dabcan, waxaa jira mowduuc aan mar walba seegno: Sideen ku ogaan karaa haddii bisadaydu xanuunsan tahay?
Mararka qaarkood waxaan arki karnaa calaamado cad laakiin mar walba sidaan ma aha. Markaa waxaan ka walwalsanahay in ka badan intii loo baahnaa. Haddaba, maanta waxaannu kaaga tagnay xoogaa tilmaamo ah oo aad ku bilaabi doonto ka shakiya in wax dhacaya Oo sidaas oo kale, waxaad u baahan tahay inaad u tagto dhakhtarka xoolaha sida ugu dhakhsaha badan si aad si buuxda uga saarto shakigaaga.
1 Isbeddelada ku dhaca rabitaankaaga cuntada
2 Isbeddellada hab -dhaqankaaga
3 Hurdada in ka badan sidii caadiga ahayd
4 Timahaagu ma laha iftiin isku mid ah
5 Cirridku way ka caddaan casaan
6 Daal degdeg ah ayaa tilmaami kara in bisadaydu jiran tahay
Isbeddelada ku dhaca rabitaankaaga cuntada
Waa mid ka mid ah astaamaha ugu cad in wax dhacaan. Ma aha inaan gacmaha madaxa saarno, maxaa yeelay malaha waa uun wax ku meelgaar ah, laakiin waa run inay tahay imtixaan cad. Sidaa darteed, haddii aan aragno sida uu u dhimayo miisaanka oo uu wehelinayo matag, wax kale oo aan sheegno ma hayno. Dabcan, waqtiyada kale, isbeddelka waa la siiyaa cun iyaga in ka badan intii caadiga ahayd waxaana laga yaabaa inaan sidoo kale ka hadalno xanuunka mindhicirka ama xitaa sonkorowga.
Isbeddellada hab -dhaqankaaga
Sidaad si fiican u ogtahay, bisaduhu waa xayawaan caado u leh. Waxay leeyihiin wax -qabadkooda aad bayna ugu adag tahay inay beddelaan. Sidaa darteed, markaad ogaato inay taasi dhacdo oo aysan ku sii wadin waxay samaynayeen, markaa waa waqtigii la weydiin lahaa haddii bisadaydu xanuunsan tahay. Tusaale ahaan, aad bay u nadiifsan yihiin laakiin haddii aad ogaato inaan loo nadiifin sidii hore ama laga yaabee, waxay aadeysaa dhinaca kale oo nadiifintuna waa xad dhaaf, waxay durba ina siinaysaa tilmaam ah inay wax dhacayaan.
Hurdada in ka badan sidii caadiga ahayd
Waxaa laga yaabaa in waqtigan ay adag tahay in la ogaado haddii bisadaydu xanuunsan tahay, waayo way seexdaan, waxay seexdaan saacado badan. Laakiin haddii aad ogaato inuu weli wakhti badan ku qaato indhihiisii ​​oo xiran, haddii aad sidoo kale dareento inuu isku dayo inuu qariyo ama uu soo tooso isagoo aan liis lahayn, waxbaa khaldan. Mar kale waxaan sheegnaa isbeddel ku dhacay hab -dhaqankiisii, wax -ka -beddelid. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad naftaada geliso gacmo khabiir si aad ugala tashato.
Timahaagu ma laha iftiin isku mid ah
Waxaan jecelahay inaan aragno sida timaheedu u siinayaan taabashada ifka. Sababtoo ah waxay la mid tahay caafimaadka iyo quruxda. Laakiin mararka qaarkood sidaas ma aha oo waxaan aragnaa dhinac ka soo horjeeda Taasi waa, waxaan ogaan doonnaa in la yiri dhaldhalaalka ayaa lumay marka lagu daro in mararka qaarkood aan ogaan doonno in ay sii murugsan tahay. Sidaa darteed, waxaan halkaas ka bilaabi doonnaa inaan ka shakinno inay wax dhacayaan. Dhinaca kale, Haa, waxaa laga yaabaa inay la xiriirto cudurada qaarkood, laakiin mid kale waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay cuntada. Taasi waa, xayawaanku wuxuu u baahan yahay qiimayaal nafaqo oo uusan fulin.
Cirridku way ka caddaan casaan
Waa run in cirridku waxay u muuqdaan casaan, taas oo ah tan tilmaamaysa xaalad caafimaad oo aasaasi ah. Laakiin mararka qaarkood waxaan arki karnaa in midabka cad uu iyaga ka muuqdo. Marka, waa mid kale oo ka mid ah astaamahaas cad ee ah inuu jiro cudur ku lug leh geedaheena. Midkood waa dhiig -yaraan, laakiin waa run in ay jiri karaan sababo kale oo aad u kala duwan. Haddii ay tahay dhiig -yaraan, waxaa sidoo kale la socon doonta daciifnimo ama daal marka lagu daro fuuq -baxa iyo miisaanka oo yaraada. Haddaba si shakiga looga saaro waxaa mar walba habboon in lala tashado dhakhtarka xoolaha.
Daal degdeg ah ayaa tilmaami kara in bisadaydu jiran tahay
Waa run inay hore u yara caajismi karaan. Laakiin marka ay timaaddo ciyaarista, iyaguna waxay siiyaan wax walba. Sidaa awgeed haddii aad aragto isbeddel aad u daran, ku dhowaad si lama filaan ah, waxaa laga yaabaa inay nagu baraarujinayso wax ka dambeeya. Haddii uusan doonayn inuu ciyaaro, haddii uu yara liis lahayn, waxaa laga yaabaa inuu leeyahay nooc ka mid ah dhibaatooyinka neefsashada. In kasta oo aynaan diiradda saari karin hal calaamad iyo midna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Mascotas » Sideen ku ogaan karaa haddii bisadaydu xanuunsan tahay?